Konke Mayelana Izinkinga zeBlackjack - UK 2021 ✅
Home » Imidlalo Yekhasino » I-Blackjack » Izinkinga zeBlackjack
Inani lesandla elibiza u-16 uma liqhathaniswa nelingu-10 lomthengisi
Inani lesandla elibiza u-12 uma liqhathaniswa no-4 womthengisi
Inani lesandla elibiza u-15 uma liqhathaniswa nelingu-10 lomthengisi
Isu Lokusebenzisana Ngezandla noma Komdlali
Ukusetshenziswa kwamaComps Comps
Kufanele ukalwe kuqala yikhasino
Ahlanganiswa kanjani amaphuzu we-comps?
Nakhu ukuthi ungaqoqa kanjani ama-comps amaningi kusuka ekhasino
Ukusetshenziswa kwamakhuphoni weCasino
Thatha Inzuzo Yesaphulelo Sokulahlekelwa
Wonke umuntu ufuna ukunciphisa umkhawulo wendlu futhi anqobe emdlalweni we-blackjack. Kepha unqoba kanjani kulo mdlalo, futhi yiliphi isu elifanele kakhulu okufanele ulisebenzise? Yebo, elinye lamasu ajwayelekile angasetshenziswa ukubheka kuqala inani eliphelele lesandla, ngaphandle kokubheka amakhadi ngamanye. Lokhu kubhekwa njengendlela yendabuko ekudlaleni i-blackjack futhi eyamukelekayo futhi edlalwa ngabaningi.
Ngenkathi le ndlela yokudlala lo mdlalo isebenza, kufanele ukhumbule ukuthi usengawathuthukisa amathuba akho uma ungaba ‘oqonde ngokwengeziwe’ noma uma uzobheka namakhadi ngamanye asesandleni.
Ukukusiza uthuthukise amathuba akho etafuleni le-blackjack, sibhale izibonelo ezimbalwa eziyisisekelo nomdlalo ofanele oncike ekwakhiweni ongawusebenzisa ukwenza ngcono amathuba akho.
Ungadlala kanjani kulesi simo? Uma ukunikela kunikezwa, isinyathelo sakho esihle ukunikela ngamakhadi ama-hard hard 16s uma ulwa nabathengisi abangu-10, ngaphandle kuka-8-8.
Umthetho ojwayelekile lapha owokuthi ume uma isandla sinamakhadi amathathu noma ngaphezulu. Isizathu salokhu ukuthi isandla sakho sinekhadi elilodwa noma amaningi anenani elincane angasatholakali emphemeni wamakhadi angadlalwanga. Lawa ngamakhadi ozowadinga ukukhulisa inani lesandla.
Futhi njengoba lawa makhadi afike esandleni sakho, kusho ukuthi izingqinamba zidlulisele umusa wakho, okwenza kube nengqondo enkulu ukuma kunokushaya. Lesi sincomo siphinde sananelwa ngabanye ochwepheshe abanjengoFred Renzey weBlackjack Bluebook II owancoma ukuthi udinga ukuma uma ulwa nabathengisi abali-10 kuthi abangu-16 bakho babe no-4 noma 5.
Kuthiwani uma uqoqe isandla esilingana ne-12 futhi ikhadi lomthengisi elingu-4 kumdlalo one-S17? Uma kunjalo, kuzofanela ubheke kuqala ukwakheka kwesandla. Kusu lendabuko lapho inani eliphelele libalulekile, isincomo ukuthi sime.
Kepha kulula ukushiwo kunokukwenza ngoba inani lesandla esingu-12 lingaba nokuhlukahluka okune, njenge-9-3, 10-2, no-8-4. Uma kwenzeka ukwakheka kwesandla kungu-10-2, kusho ukuthi kungokwenzuzo yakho ukushaya ikhadi leposi le-4. Kepha uma isandla sine-9-3, 8-4 noma i-7-5, kunconywa kakhulu ukuthi ume.
Uma ubhekene neziteji eziyisithupha noma ezimbalwa zokudlala amakhadi, kungcono ukuthi ushaye ngenani lesandla esingu-12 nge-10-2 lapho udlala nabathengisi abangu-4. kodwa kumdlalo onezitezi eziyisishiyagalombili, ochwepheshe bancoma ukuthi ume.
Isu lendabuko ukutholakala kokuzinikela uma udlala namakhadikhadi ayi-10 omthengisi wekhasino. Kepha ungakhuphula amathuba akho wokuwina uma uthola kuqala ukwakheka kwesandla. Uma uphethe i-15 ene-8-7, khona-ke kuwukuhlakanipha uma ungashaya esikhundleni sokuzinikela, ngaphandle kokuzinikela okungenani emaphaketheni ayi-7.
Leli iqhinga elisha ku-blackjack njengoba lithandwa nguFred Renzy, umdlandla futhi umbhali weBlackjack Bluebook II. Lesi sihloko sihlolwe nakwezinye izincwadi futhi sisebenza njengeBlackjack Insider e-Newsletter.
Ukusebenzisana kwesandla elinye isu elingasetshenziswa ngabadlali ukwehlisa umkhawulo wendlu. Leli isu elingeke lisebenzele isidlali esithule noma esinamahloni ngoba uzodinga ukwenza okuningi ukuhamba nezingcingo ezincike ezandleni zomunye umdlali.
Kubandakanya nokucela abanye abadlali abasetafuleni ukuthi babheje ngesandla sakho. Le ndlela ingenziwa ngezindlela ezahlukahlukene. Isibonelo, ungabamba iqhaza noma yonke imali ezuzisa kabili yomdlali noma unikeze ingxenye yokwehlukaniswa kwakho okubi.
Ungabheka ezibonelweni ezingezansi ukuze uqonde kangcono ukuthi isu lisebenza kanjani.
Yisho isibonelo umdlali ohlezi eceleni kwakho wenze ukubheja okungu- £ 20 futhi wanikezwa isandla ngo-7-4, ngo-10 wekhadi leposi. Indlela enengqondo kunazo zonke engenziwa lapha ukuphinda phansi kabili noma ukubheja kabili.
Kuthiwani uma umdlali oseduze kwakho ethatha isinqumo sokungadlali kabili phansi njengoba bekulindelwe ngoba ubona amakhadi ayi-10 enamandla kakhulu? Ithi ngokwesibonelo umdlali unquma ngokungazelelwe, kepha uyakwazi ukuphinda kabili ngokuncane bese ehambisa ama-chips akhe amabili abomvu, ngo- £ 5 lilinye. Uma kunjalo, lapho-ke ongakwenza ukuxhumana nesandla ukuze uthole izinzuzo ezimbalwa futhi.
Ngokusho kukaRenzey, ongakwenza ukuphonsa amanye ama-chips amabili abomvu kulowo mdlali futhi umazise ukuthi uzomsiza akhokhe ukuze aqedele okuphindwe kabili. Ngokudlala leli qhinga, unethemba lokuthi umdlali uzothatha isipho sakho. Kumakhasino amaningi, abadlali abaningi bazokuthatha lokhu.
Manje siyini isizathu sokwenza lokhu? Njengoba umdlali oseceleni kwakho angafuni ukusizakala ngokunikezwa okuhambisana nokuphindwe kabili, khona-ke kungcono ukuthi ubambe iqhaza kulokhu. Uma kwenzeka iphumelela, i-wager yakho (£ 10) izothola i- £ 10 eyengeziwe okusobala ukuthi isinyathelo esihle yize bekungelona ithuba lakho!
Ngenkathi ubambe iqhaza emdlalweni we-blackjack, umdlali ongakwesokudla wagered £ 25 futhi wanikezwa i-blackjack, futhi ikhadi leposi lomthengisi yi-Ace. Ngaphansi kwalezi zimo, umdlali unelungelo lokucela ‘imali ngisho’, okusho ukuthi angathola ngisho nemali ye-blackjack, kungakhathalekile inani eliphelele lesandla somthengisi.
Ukugembula ngisho emalini akuthathwa njengokuhamba okuhle ngaphandle kokuthi ubala amakhadi aphuma emphemeni. Kepha kubadlali abaningi, ukusebenzisa ngisho nemali kuyinto enhle ngoba kunesiqiniseko sokuthi kukhona abazokuthola.
KuRenzy, okuhamba phambili kulesi simo ukusho ukuthi awucabangi ukuthi umthengisi une-blackjack, futhi uzimisele ukuthenga isandla somdlali ngisho nemali. Ngemuva kokusho lokhu, ungaphonsa esihlalweni sakho oshizi abalingana nenani alibheje. Omunye umdlali uzojabula ngokwazi ukuthi ubuyisele imali yakhe kanye nenye imali njengenzuzo ye-blackjack.
Kulesi simo, manje unesandla, futhi ungakhokhelwa imali ephindwe ka-1.5 ukubheja kumthengisi uma engaphethe i-blackjack, noma ilahlekelwe yikho konke uma kukhona i-blackjack. Lokhu kungabonakala njengokuhamba, kepha ngokuhamba kwesikhathi, lokhu kuzophela njengokuhamba okunenzuzo enkulu ngoba uzoklonyeliswa ngokungavumelani kwe-3-2.
Ngamafuphi, kungasiza imbangela yakho uma ungaxuba amasu akho ayisisekelo nokuxhumana. Lokhu kungakusiza uthole inzuzo futhi wehlise umkhawulo wendlu.
Bewazi ukuthi futhi unganciphisa umkhawulo wendlu uma ungalinganiswa ekhasino futhi ucele ama-comps? Ngokwesichasino sekhasino, ‘ama-comps’ yisifinyezo sokuncoma, futhi lokhu kusebenza njengezinzuzo ezinikezwa abadlali abavamile bekhasino.
Manje yini ama-comps futhi angakusiza kanjani lapho uyilungu lekhasino? Yebo, amaphuzu ekhompiyutha aqoqiwe ekhasino angasetshenziselwa ukujabulela i-buffet, indawo yokuhlala egumbini lehhotela noma ukumboza imali yomoya. Futhi uma udlala i-blackjack, amathuba akho okuthola amaphuzu amaningi we-comps ayanda, futhi lawa maphuzu aqoqiwe angasetshenziselwa ukwehlisa umkhawulo wendlu.
Unentshisekelo yokufunda kabanzi ngaleli su? Qhubeka ufunde, bese uthola ukuthi ungawasebenzisa kanjani ama-comps ekhasino.
Ukuze uqale ukuqoqa amaphuzu futhi waziswe, kubalulekile ukuthi ubhalisele iKhadi Lomdlali kuqala. Ungakwenza lokhu ngokuvakashela i-Player’s Club. Kuma-casino amaningi, isicelo sobulungu singaqedwa ku-inthanethi. Lokhu mahhala, futhi lokhu kutholakala kunoma ngubani ofuna ukusizakala ngokunikezwa.
Lapho uqala ukudlala umdlalo wekhasino njenge-blackjack, kuzodingeka ukuthi ulayishe ikhadi kumthengisi. Ngemuva kokuthola ikhadi, umthengisi uzobe eserekhoda imininingwane yakho yomdlali encwadini yokurekhoda noma ngokubuyekeza imininingwane yakho online. Lapho usuqale ukudlala kwakho, umphathi wekhasino noma umuntu ophethe uzoqhubeka ahlole indlela oziphatha ngayo etafuleni, abheke inani lezinto ozenzayo.
Kungumsebenzi womuntu ophethe ukuqaphela umlando wakho wokubheja, inani lokubheja okwenzayo nesikhathi osichitha etafuleni le-blackjack. Inani lamaphoyinti ozolithola lixhomeke ekubonweni kwabo.
Njengokwenziwayo, kungcono ukuthi ubuze umphathi ngamaphoyinti akho we-comps ngemuva kokuphothula ukudlala kwakho. Uma ubuza, qiniseka ukuthi ubuza ngendlela enhle futhi enobungane. Akufanele ulindele ukuthi uzodlela endaweni yokudlela enhle uma ukubheja kwakho kungama-chips angama- £ 5 asetafuleni.
Inani lamaphuzu ikhasino elizokunika lona lizoya ngenani oliletha ekhasino. Ngamafuphi, kungumsebenzi wekhasino ukubala ukubaluleka kwakho, ngokuya ngenani lezokubheja oziletha nesikhathi osichitha etafuleni le-blackjack.
Yisho isibonelo ukuthi ukubheja kwakho okujwayelekile kungu- £ 100 (uyi-VIP enolwazi) futhi uzodlala amahora amahlanu, futhi ake sicabange ukuthi unikezwa izandla eziyi-100 ngehora. Lokhu kusho ukuthi isamba esiphelele ozobheja ngaso ekuvakasheni kwakho ekhasino yile:
Izandla eziyi-100 x £ 100 ukubheja ngesandla x amahora ama-5 = £ 50,000
Kusetshenziswa inani labo lokucabanga, ikhasino elijwayelekile lizobala amaphuzu akho lisebenzisa ifomula elandelayo:
Isenzo x indlu inzuzo = Ukulahleka kwesayensi komdlali
Njengoba kungenzeki kubaphathi nabaphathi bekhasino ukuthi babuke ukudlala kwakho njalo, abaphathi bazothatha inzuzo engamaphesenti ama-2 kunabadlali abakhetha ukudlala lo mdlalo. Lokhu futhi kuthatha ukuthi iningi labadlali abadlala i-blackjack abanalo ulwazi olunjalo, okungenani maqondana nokusebenzisa amasu ayinkimbinkimbi kakhulu kulo mdlalo. Ngakho-ke usebenzisa ifomula enikezwe ngenhla:
I- £ 50,000 isebenza x amaphesenti ama-2 ngaphakathi endlini inzuzo = £ 1,000 ukulahlekelwa kwe-theory komdlali
Usebenzisa ifomula engenhla, ikhasino izofunda ukuthi ukubaluleka kwakho kuzungeze u- £ 1,000. Manje, amakhasino amaningi azonikeza isaphulelo esivame ukusukela kumaphesenti angama-20 kuye kumaphesenti angama-40. Uma ucabanga ukuthi ikhasino izonikeza isaphulelo esingamaphesenti angama-20 lapho:
Ukulahleka kwemfundiso engu- £ 1,000 komdlali x isaphulelo samaphesenti angama-20 = £ 200
Lokhu kusho ukuthi ikhasino inganikela ngo- £ 200 kuzaphulelo noma kumaphoyinti wokuhlanganisa. Ngamafuphi, ungasizakala ngalesi sipho esinobungane sekhasino, futhi bacabanga nokuthi uzolahlekelwa ngamaphesenti ama-2 wesenzo. Manje, uma ungumdlali onolwazi futhi uyazi ukuthi uwudlala kanjani umdlalo, ngokuqinisekile ungasebenzisa ngokunenzuzo ukunqoba futhi uzuze okuningi.
Ukutholakala kwama-comps wabadlali kungumnikelo omuhle ongakhuphula i-bankroll. Kepha ungakhuphula amathuba akho ngokunaka izeluleko ezilandelayo ngezansi:
Ikhasino lizothatha ukuthi umdlali ojwayelekile uzodlala izandla eziyi-100 ngehora. Lokhu akusho ukuthi uzodlala ngaleli banga. Uma ufuna ukusizakala ngokunikezwa, kungcono ukuthi ukuthathe kancane, futhi umane uthokozele isikhathi sakho ekhasino.
Esikhundleni sokudlala ematafuleni nabadlali abambalwa, kunconywa kakhulu ukuthi udlale kumatafula e-blackjack ematasa futhi aminyene. Kubalulekile futhi ukuthi ungasheshi uthathe izinqumo zakho lapho udlala lo mdlalo. Uma udlala endaweni epholile yekhasino, ungasebenzisi sonke isikhathi sakho etafuleni lekhasino.
Uma kungenzeka, thatha ikhefu ngaphambi kokubuyela etafuleni. Iphuzu lapha ukuthatha umdlalo uhambe kancane futhi esikhundleni sokudlala izandla eziyi-100 ngehora, zama izandla ezingama-50 kuye kwangama-60. Uma unciphisa inani lezandla ozidlalayo, unganciphisa ukulahlekelwa kwakho okulindelekile.
Njengokwenziwayo, umphathi wekhasino uzokubheka ukubheja kokuqala ozokwenza etafuleni. Njengoba amehlo ekubheja kwakho kokuqala, kuzuzisa ukubheja inani eliphakeme, yithi £ 30 esikhundleni se- £ 10 ejwayelekile. Lokhu kuzorekhodwa kuwe, futhi kuzokhuphula inani lakho emehlweni ekhasino.
Ngemuva kokuphothula umdlalo wakho etafuleni, kungcono ukuthi ubonisane nomphathi wekhasino ukuze azi isilinganiso sakho ngokuya ngokubheja okumaphakathi okwenzile. Uma umphathi ekutshela ukuthi ukubheja kwakho okujwayelekile kungu- £ 10, ungasho ukuthi ukubheja kwakho kuyahlukahluka, kusuka ku- £ 10 kuye ku- £ 40 noma ngabe ukubheja kwakho okuphezulu bekuyini.
Njengenqubomgomo, abaphathi nabaphathi abafuni ukukhubekisa abadlali ngakho-ke nakanjani bazokwenza lokho kulungiswa okudingekayo ukukhulisa isilinganiso esirekhodiwe. Uma isilinganiso sakho sokubheja sikhuphukile, lokhu kuzokhuphula nenani lakho elizokhulisa ama-comps.
Amakhasino ayaziwa futhi ngokunikela ngamakhuphoni ekhasino, futhi la angasetshenziselwa ukudlala umdlalo ngisho nokubheja okukodwa. Kunezinhlobo ezahlukahlukene zamakhuphoni ekhasino, kanti amanye aziwa kakhulu axoxwa ngezansi:
Esikhundleni sekhuphoni, abadlali bangaklonyeliswa nge-chip yokuphromotha. Le chip inikezwa ngezizathu ezahlukahlukene, imvamisa inikezwa abadlali abadlala njalo ekhasino. Njengethuluzi lokumaketha, i-chip promo ingasetshenziselwa ukudlala umdlalo esikhundleni se-chip chip noma ithokheni ejwayelekile.
Ngemuva kokucindezela i-chip endaweni, umthengisi uzokubheka ukubheja futhi uzosusa i-chip etafuleni. Uma umdlali ephumelela kulo mzuliswano, umthengisi uzokhokha ama-winnings esebenzisa ama-chips ejwayelekile ekhasino.
Manje, uma isandla somdlali sihlulwa, i-chip promo isuswa etafuleni, futhi umdlali agcine engenalutho. Uma kwenzeka kuthayi, umdlali uzohlala egcina ubunikazi be-chip ye-promo, futhi lokhu kungasetshenziselwa ukudlala omunye umzuliswano. Manje, uma umdlali efuna ukusiphinda kabili noma ukuhlukanisa isandla, kufanele asebenzise ama-chips noma amathokheni ajwayelekile asetshenziswa ekhasino.
Abadlali bangathola futhi amakhuphoni wokufanisa avela ekhasino. Lokhu ukubheja okwenziwe yi-casino kumdlali. Isibonelo, ubeka i- £ 10 chip etafuleni kanye nekhuphoni le-matchplay. Uma ukwazile ukuwina ngesandla, ukhokhelwa ama- £ 10 nge- chip chip yekhasino nenye i- £ 10 yokusebenzisa ikhuphoni ye-matchplay. Uma wehlulwa, uzohlukanisa kuphela izindlela ne- £ 10 emalini yakho.
Isigqebhezana se-matchplay singasetshenziswa kanye ngaphandle kwezibopho ezikuvumela ukuthi udlale isigqebhezana okwesibili. Lapho isigqebhezana sesisetshenzisiwe, isigqebhezana sizosuswa etafuleni. Khumbula ukuthi lapho ufuna ukuhlukanisa isandla noma kabili phansi, ungakwenza kuphela usebenzisa ukubheja kwakho.
Futhi, inani lesigqebhezana lingamaphesenti angama-46.2 wenani lobuso. Ngakho-ke uma unesigqebhezana esingu- £ 100, inani laso lilingana ne- £ 46.20.
Lelisu lidinga ukuxoxisana nekhasino ukuze ukwazi ukuqoqa ingxenye yelahleko yakho bese wenza kanjalo, wehlise umkhawulo wendlu. Le ndlela yenziwa kakhulu ngama-VIP nabadlali abajwayelekile ngoba ibandakanya amanani amakhulu, futhi ama-opharetha ekhasino ahlala kakhulu nabadlali ababaluleke kubo.
Leli isu elisetshenziswa kakhulu ngama-VIP futhi kungenzeka lingasebenzi kubadlali abamaphakathi noma abaqalayo. Uma ucabanga ukuthi udlale kakhulu ekhasino futhi manje ‘ubalulekile’ kubo, mhlawumbe ungahlola le nketho ukunciphisa umkhawulo wendlu.
Isu lendabuko le-blackjack lidinga ukuthi abadlali bazi inani eliphelele lesandla
Yize leli qhinga lisebenza, usengakhulisa amathuba akho ngokunemba kuzingcingo zakho zokwahlulela
Isu elilodwa eliqondile ukwazi ukwakheka kwesandla
Ukusebenzisana kwesandla elinye isu elihloliwe elingasetshenziswa ukunciphisa umkhawulo wendlu
Indlela yokuxhumana ngesandla ngeke isebenze kumdlali onamahloni ngoba idinga ukusebenzisana nabanye abadlali etafuleni
Amakhompiyutha weCasino angasebenza nakuwe ekunciphiseni umphetho wekhasino
Amaphoyinti aqoqiwe ekhasino angasetshenziswa futhi ukujabulela amathikithi wamahhala nezindiza
Amakhuphoni namashipsi wekhasino izinzuzo zekhasino ezingasetshenziswa ukudlala etafuleni
Amakhuphoni namachips angasetshenziswa kanye, futhi awakwazi ukusetshenziswa uma uphinda kabili phansi noma uqhekeka